Peroxyde hidrôzenina amin'ny volo - Ny mahatsara sy maharatsy azy | Bezzia
Peroxyde hidrôzenina amin'ny volo dia mitovy amin'ny fiolanan-tarehy. Eny, satria io singa io dia manamaivana ny volo, tsy mila mampiasa loko. Aza adino fa matetika ny loko dia manana peroxyde hidrogen ho an'ny tanjona iray ihany. Mazava ho azy fa maro ny olona mahita fa hafahafa ny fampiasana azy misaraka.
Na eo aza ny zava-misy fa ny hidrôzenina peroxyde ho an'ny volo dia iray amin'ireo loharanom-pahalalana fototra hanazavana azy, tsy maintsy fantatrao ny lafiny tsara sy ratsy. Misy lafiny roa foana ny vola mitovy ary maro hafa, raha ny vokatra tsara tarehy. Raha mieritreritra ny hampamono ny volonao ianao dia aza hadino ny zavatra manaraka.
1 Peroxyde hidrôzenina amin'ny volo, ny maharatsy azy
2 Ny tombony azo avy amin'ny hidrozenina peroxyde amin'ny volo
3 Fomba fampiasana peroxyde hidrozenina amin'ny volo
Peroxyde hidrôzenina amin'ny volo, ny maharatsy azy
Manomboka amin'ny vaovao ratsy izahay, izay tsy iza fa ny maharatsy ny fandatsahana hidrozenina peroxyde amin'ny volonao. Izy io dia miasa ho toy ny activator ho an'ny mahazo volo maivana kokoa. Izy io dia misy amin'ny loko, ho an'io tanjona io ihany. Marina fa afaka maina, mandoro ary mampihena ny volo izy io, satria izany rehetra izany dia miankina amin'ny habetsaky ny hidrozenina peroxyde izay ampiasaintsika ihany koa. Noho izany, tsy maintsy fantatrao fa tena dingana mahery setra amin'ny volonao izany.
Ny tsara indrindra dia ny manomboka amin'ny fanamaivanana kofehy vitsivitsy, ho fanasongadinana. Fa eny, raha mbola salama tanteraka ny volo. Raha tsy izany, araka ny efa noresahintsika, dia mety mbola hihamalemy sy hianjera be loatra. Aza manararaotra ny habetsany na ny fotoana. Satria arakaraka ny anaovanao azy matetika dia arakaraka ny anananao ny fanasaziana ny volonao. Tsy izay ihany, fa afaka mahazo loko volomboasary ianao izay tsy dia mendri-piderana indrindra.
Ny tombony azo avy amin'ny hidrozenina peroxyde amin'ny volo
Eny, tsy azontsika antsoina hoe tombony ihany koa izy ireo, saingy marina fa raha nanome ny vaovao ratsy isika dia izao no tsy maintsy tonga ny vaovao tsara. Marina fa manasongadina kofehy sasany izy io satria hanamaivana azy ireo. Ny iray amin'ireo tombony lehibe dia izany Ny fomba azo atao ao an-trano ary mihoatra lavitra noho ny vidin'ny loko. Noho izany, dia mbola tsara kokoa ny misafidy sprays izay manamaivana.
Ao amin'izy ireo dia misy peroxyde hidrôzenina ho iray amin'ireo akora lehibe indrindra nefa misy koa ny hafa mba tsy hijaly be loatra ny volo, mivantana. Izy ireo dia mety amin'ny tonony antonony na volontany. Satria ny volo volontsôkôlà dia mety fa tsy manamaivana, misafidy haka feo mena kokoa izay tsy mandokadoka koa. Ny tsara indrindra dia ny misafidy ny hanazava kofehy vitsivitsy fotsiny. Ho tsara kokoa ho an'ny volontsika foana izany ary hieritreritra raha hampifaly antsika na tsia ny valiny.
Fomba fampiasana peroxyde hidrozenina amin'ny volo
Alohan'ny hametahana azy amin'ny volonao dia tsy maintsy karakarainao izany. Noho izany, herinandro vitsivitsy talohan'izay, dia tsara kokoa ny tsy mandoko, mampiasa vokatra voajanahary foana, manadino ny lacquers na foam ary mazava ho azy, mampiasa sarontava mahamando. Izy io dia tokony ho peroxyde hidrogen 3% ary tsy hisy intsony (azonao eto izany). Voalohany, handray kofehy ianao ary handalo baolina landihazo voahosotra hidrozenina peroxyde amboniny. Azonao atao ny mamerina an'ity dingana ity amin'ny kofehy tadiavinao ho maivana. Tsy maintsy miandry minitra vitsivitsy ianao mandra-pahazoanao ilay loko irina ary hosasana amin'ny rano mangatsiaka. Aza avela handalo mihoatra ny antsasak'adiny.
Ny tsara indrindra dia ny manandrana lamandy foana. Avy eo, manam-potoana hanohizana ny hafa ianao, raha tsy tianao ny vokany. Ankoatry ny fanampiana ireo fisaintsainana ireo dia afaka manao loko miloko ihany koa ianao ary noho izany dia tsy maintsy apetakao ny peroxyde hidrogenena avy eo amin'ny faran'ny ka hatramin'ny afovoany. Izany dia hahatonga ny tapany ambony amin'ny lohany ho alokaloka sy ny afovoany ary ho maivana kokoa ny farany. Fa ataovy ity dingana ity rehefa efa fantatrao fa tianao ny loko avelan'ity ranoka ity amin'ny volonao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Fandram-bolo » Peroxyde hidrôzenina amin'ny volo, mahatsara ary maharatsy
Salama ny anarako dia LUIS ary tsara, nampiasa hidrozenina peroxyde indray mandeha aho mba hanamaivana ny voloko ary tena nandaitra izy io nefa tiako ho fantatra amin'ny antsipiriany kokoa (Rehefa mampiasa azy io dia mihamalemy ny volo ary milatsaka kely kokoa)
.ary manontany tena aho raha mampiasa shampoo na crème mba handraoka ireo vitamina, afaka mampiasa hydrônexide peroxyde ve aho? Sa ho very volo be loatra aho?
Fijerena an-tanàn-dehibe miaraka amin'ny T-shirt
Voanjo Brezila, safidy matsiro hampanan-karena ny vatantsika